Wararka - Naqshadaynta Xirfadlayaasha Shiinaha 3 Sano Warranty Smart Goynta Fiber Laser Metal Cutter Machine
Si loo caawiyo bulshada magaalada yar ee California, METALfx iyo Adventist Health Howard Memorial Hospital waxay ku biireen ciidamada intii lagu jiray masiibada COVID-19 . Getty Images
Nolosha Willitz, California waxay la mid tahay nolosha magaalo yar oo fog oo ku taal Maraykanka. Qof kasta oo aan xubin qoyska ka ahayn wuxuu ku dhow yahay xubin qoys, sababtoo ah waxaad u maleyneysaa inaad si fiican u garanayso.
Willits waa magaalo yar oo ay ku nool yihiin ilaa 5,000 oo qof oo ku taal badhtamaha Gobolka Mendocino, qiyaastii laba saacadood u jirta woqooyiga San Francisco. Waxay leedahay inta badan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah noloshaada, laakiin haddii aad u baahan tahay inaad aado Costco, waa inaad u safar 20 mayl dhanka koonfureed ee wadada US Highway 101 ilaa Ukiah, oo ah magaalo weyn oo ay ku nool yihiin 16,000.
METALfx waa farshaxan leh 176 shaqaale ah, iyo Adventist Health Howard Memorial Hospital waa labada shaqo-bixiye ee ugu weyn gobolka. Intii lagu jiray masiibada COVID-19, waxay sidoo kale door muhiim ah ka ciyaareen caawinta bulshada iyo is caawinta midba midka kale.
METALfx waxaa la aasaasay 1976. In roller coaster ee dhaqdhaqaaqa suuqa, dhar badan oo leh waqti isku mid ah waa isku mid. Horraantii 1990-meeyadii, shirkadu waxay heshay dakhli sanadeedka 60 milyan oo doolarka Maraykanka ah waxayna shaqaalaysay qiyaastii 400 shaqaale ah. Si kastaba ha ahaatee, qiyaastii isku mid ah Markii macaamiil weyni uu go'aansaday in uu u guuro hawlaheeda wax soo saarka ee dibadda, shirkadu way yaraatay oo shaqaale badan ayaa shaqo la'aan ah. Dhammaan waaxdii waa la burburiyay. Ilaa xad, shirkaddu waxay noqotay inay dib u bilowdo.
Sannado badan, METALfx waxay si adag u shaqaynaysay si ay uga fogaato xaaladdan. Hadda, xeerka dahabiga ah ee shirkadu waa in macaamiishu aanu xisaabin karin wax ka badan 15% dakhliga guud ee shirkadda. Bandhigga qolka shirarka ayaa si cad u muujinaya tan, taas oo caddaynaysa. 10-ka macmiil ee ugu sarreeya shirkadda. Shaqaalaha METALfx kaliya maaha inay yaqaaniin cidda ay u shaqeeyaan, laakiin sidoo kale waxay ogaadaan in mustaqbalka shirkadu aanu go'aamin hal ama laba shirkadood oo waaweyn.
Soo saaraha ayaa siiya macaamiisheeda adeegyada injineernimada, farsamaynta iyo wax soo saarka, oo ay ku jiraan goynta laysarka, shaabadaynta, shaambada, foorarsiga mashiinka, iyo alxanka birta gaaska iyo gaaska tungsten arc.Waxa kale oo ay bixisaa adeegyada isu-ururinta, sida isu-dheellitirka iyo dhismaha golaha-hoosaadka. Agaasimaha horumarinta ganacsiga iyo suuqgeynta ee METALfx Connie Bates ayaa sheegay in khadka dahaarka rinjiga iyo budada ay ku qalabaysan yihiin khad ka hortag ah oo heerar badan ah waxaana sidoo kale la caddeeyey in ay caan ku yihiin macaamiisha raadinaya dukaan hal-joojin ah si ay u bixiyaan qaybo qaabaysan oo la dhammeeyey.
Bates wuxuu sheegay in adeegyadan iyo alaabooyinka kale ee qiimaha lagu kordhiyey, sida bixinta wakhtiga iyo naqshadaynta shaqada, ay gacan ka geysteen dhisidda faylalka macaamiisha ee soo saaraha sannadihii la soo dhaafay. Shirkaddu waxay ku guulaysatay heerka kobaca sanadlaha ah ee 13% 2018 iyo 2019.
Kobaca waxa weheliya macaamiil badan oo muddo dheer ku jiray, qaarna waxay soo jireen 25 sano, iyo qaar cusub oo macmiisha ah.METALfx waxa ay dhawr bilood ka hor heshay macaamiil weyn oo dhanka gaadiidka ah, waxa aanay noqotay mid ka mid ah macaamiisheeda ugu waaweyn. .
"Waxaan haynaa 55 qaybood oo cusub oo nagu soo dhacaya bil gudaheed," ayuu yiri Bates. METALfx ayaa yara turunturooday isagoo isku dayaya inuu qabto dhammaan shaqooyinka cusub, laakiin macaamilka ayaa filayay qaar ka mid ah dib u dhac ku yimid jawaabta, isagoo qiraya in ay maal-galisay shaqo badan oo ka mid ah dharka. mar, ayuu Bates ku daray.
Horraantii gu'ga 2020, soo-saaraha ayaa rakibay mishiinka cusub ee Bystronic BySmart 6 kW fiber laser goynta, kaas oo ku xidhan munaaradda kaydinta tooska ah iyo soo celinta iyo nidaamka wax ka qabashada ee ByTrans Cross si uu ula socdo xawaaraha wax qabad ee sare ee laser fiber .Bates waxa uu sheegay in Laser-ka cusubi uu ka caawin doono shirkadu inay la kulanto macaamiisha wakhtiyada gaabsan ee ay wax u keenayaan, isla markaana ay shan jeer ka dhakhso badan yihiin mishiinka goynta CO2 ee 4 kW ah, waxaanay soo saari doontaa qaybo leh cidhifyo nadiif ah. Mashiinnada goynta laser-ka Mid ka mid ah ayaa loo hayn doonaa prototype / cutubyo degdeg ah.) Isticmaalka tamarta xaddidan ee mashiinnada goynta laser-ka ayaa sidoo kale aad ugu habboon shirkadda, ayay raacisay, sababtoo ah gobolka Baasifigga Gaaska & alaab-qeybiyaha korontada ayaa aad u xiiseynaya inuu yareeyo baahida xad-dhaafka ah, gaar ahaan haddii ay dhacdo masiibooyinka dabiiciga ah (sida dabka kaynta ee sannadkii hore).
Maamulka METALfx wuxuu u qaybiyay shaqaalaha COVID-19 xirmooyinka badbaadinta nafta bishii Maajo si ay ugu mahadceliyaan inay shaqada aadeen, si ay u taageeraan ganacsiyada maxalliga ah. Xidhmada badbaadada COVID-19 kasta, qaatayaashu waxay ka heleen waji-xidho, dhar nadiifin ah iyo shahaadooyin hadiyadeed oo deegaanka ah. makhaayadaha.
METALfx waxay heshay dardar badan oo togan bilowgii sanadkan, iyada oo ay kordheen ku dhawaad ​​12% marka la barbar dhigo isla muddadaas 2019. Laakin xiisadda ka jawaabeysa COVID-19. Ganacsigu isku mid ma noqon doono, laakiin ma joogsan doonto.
Marka California ay bilowdo inay ka jawaabto dillaaca coronavirus-ka Maarso, METALfx waxay isku dayeysaa inay ogaato sida ay u socon doonto Macmiilku waa soo saaraha qalabka baadhista caafimaadka, qaar ka mid ah alaabtiisa waxa loo isticmaalaa in lagula dagaalamo coronavirus. lama xidhi doono inta lagu jiro aafo.
"Waxaan isku dayeynaa inaan ogaano waxa aan sameyno," ayuu yiri Henry Moss, madaxweynaha METALfx." Waxaan eegay Amazon oo ma helin buug ku saabsan sida loo maamulo shirkad inta lagu jiro cudurka.Wali ma qorin.”
Si loo sameeyo go'aanka saxda ah ee lagu ilaalinayo shaqaalaha oo awood u siinaya shirkadu inay fuliso waajibaadkeeda saadka, Moss waxay la xiriirtay Adventist Health Howard Memorial. Ganacsadaha wakhtigaas iyo mulkiilaha ugu dambeeya ee tartanka faraska caanka ah ee Seabiscuit Aasaasku wuxuu ku salaysan yahay ina Howard oo lagu magacaabo Frank R. Howard (Frank R. Howard), oo ku dhintay shil baabuur.Maamulka METALfx ayaa la kulmay labada hogaamiye ee caafimaadka isbitaalka si ay u fahmaan tallaabooyinka ay qaadayaan si ay isu hubiyaan muddadan Badbaadada iyo caafimaadka shaqaalaha.
Shaqaaluhu waxay eegaan heerkulka jirkooda ka hor intaysan gelin xarunta si ay u ogaadaan inay qandho yeelan karaan iyo in kale. Waxa kale oo la waydiiyaa maalin kasta haddii ay muujinayaan wax calaamado ah oo la xidhiidha cudurka 'coronavirus'. Tallaabooyin kala fogaansho bulsho ayaa jira Fayruuska corona, noloshoodu waa la halis geli karaa, shaqaalaha la kulma xaaladooda caafimaad waxaa sidoo kale lagu amrayaa inay guryahooda joogaan.Moss wuxuu sheegay in inta badan tillaabooyinka ilaalinta la qaaday toddobaadyo ka hor hagida rasmiga ah ee ay bixiyaan mas'uuliyiinta federaalka iyo kuwa gobolka.
Dhismayaasha dugsiga oo la xidhay iyo waxbaristu waxay u jeesteen adduunyo toos ah, waalidiintu waxay si lama filaan ah uga welweleen daryeelka carruurta inta lagu jiro maalinta. Bates waxay sheegtay in shirkaddu ay bixiso adeegyo isbeddel ah oo loogu talagalay shaqaalaha u baahan inay guriga joogaan inta lagu jiro maalinta dugsiga farsamada.
Si aad uga farxiso xirfadle kasta oo wax soo saara oo caato ah, METALfx waxay ku dabaqdaa aaladaha tusaha aragga qorshaheeda ka hortagga COVID-19. Marka shaqaaluhu ka gudbaan barta hubinta heerkulka oo ay galaan wajiga su'aasha iyo jawaabta, waxay heli doonaan dhejis wareegsan oo midab leh oo si fudud loo arki karo calaamad Haddii ay tahay maalin dhejis buluug ah oo shaqaaluhu uu hubiyo inaysan jirin wax qandho iyo calaamado ah, isaga ama iyada waxay heli doonaan sticker buluug ah.
"Haddii cimiladu wanaagsan tahay oo maamuluhu uu arko qof leh dhejis jaale ah, markaa maamuluhu wuxuu u baahan yahay inuu soo qaado qofkaas," Bates ayaa yidhi.
Waqtigaan oo kale, METALfx waxay heli doontaa fursad ay ku siiso asxaabtooda isbitaalka. Iyadoo faafitaanka coronavirus iyo dadku ay garwaaqsadeen in shaqaalaha caafimaadka ee safka hore aysan haysan qalab ilaalin shaqsiyeed oo habboon (PPE), maamulka METALfx wuxuu gartay inay haystaan Bates ayaa sheegay in ay go'aansadeen in ay la xiriiraan maamulka isbitaalka si ay u siiyaan maaskaro N95 ah waji-xidho buluug iyo caddaan ah oo hadda ku badan deegaanka gudaha.
Henry Moss, Madaxweynaha METALfx, ayaa kor u qaaday laba duub oo warqad musqul ah, kooxina waxay gacan ka gaysatay isu-ururinta 170 xirmooyinka badbaadada COVID-19.
METALfx waxay kaloo baratay fursadda lagu caawinayo Frank R. Howard Foundation, oo ah hay'ad aan faa'iido doon ahayn oo u heellan inay taageerto xasilloonida iyo horumarinta isbitaallada iyo u adeegidda bulshada Willits. Aasaaska ayaa isku dubarideysa qaybinta kumanaan maro-masgaras ah oo ay sameeyeen harqaanleyaasha maxalliga ah. Si kastaba ha ahaatee, maaskaradani ma bixiyaan maaskaro sanka sanka ah oo ku dhow sanka, taas oo sahlaysa in la ilaaliyo maaskarada oo ka dhigaysa mid waxtar leh si looga hortago wadaagista dhibcaha coronavirus ama neefsashada. iyaga ka mid ah.
Shaqaalaha ku hawlan qaybinta maaskaro waxay isku dayeen inay gacanta ku sameeyaan maaskarada sanka birta ah, laakiin sida muuqata tani ma ahayn mid wax ku ool ah. Waxaa soo baxday in shirkadu ay haysato qalab shaabad ah oo soo saari kara qaab oval ah oo la mid ah qaabka la rabo, waxayna gacanta ku haysaa aluminium si loo sameeyo buundada sanka. Iyadoo la kaashanayo mid ka mid ah Amada Vipros turret punch presses, METALfx waxay soo saartay buundooyinka sanka 9,000 hal galabnimo.
"Waxaad aadi kartaa dukaan kasta oo magaalada ku yaal, qof kasta oo rabana wuu iibsan karaa," Moss ayaa yidhi.
Sidaa darteed, iyada oo waxaas oo dhan ay socdaan, METALfx waxay wali soo saartaa qaybo loogu talagalay macaamiisheeda waaweyn. markan.
Kadib waxaa yimid luminta warqaddii musqusha, taasoo meesha ka saartay badi khaanadaha dukaamada."
Shirkaddu waxay xaqiijisay alaab-qeybiyeyaasheeda wax soo saarka warshadaha inay wali keeni karto warqadda musqusha. Sidaa darteed, Moss waxay la noqotay inay xiiso u leedahay in lala wadaago alaabooyinka waraaqaha ah ee aadka loo raadiyo saaxiibbo shaqo adag leh.
Laakiin sidoo kale wakhtigan, dadku waxay ku riixayaan dadka deegaanka Willits inay taageeraan ganacsiyada magaalada. Ka dib markii uu dhaqan galo amarka magangalyada, dadku kuma kharash gareeyaan dukaamada maxalliga ah iyo makhaayadaha.
Maajo 1, Degmada Mendocino ayaa soo saartay amar dadweyne oo uga baahan dadka deegaanka inay xidhaan waji-xidho inta lagu jiro isdhexgalka dadwaynaha qaarkood.
Dhammaan arrimahan ayaa ku kalifay kooxda maamulka METALfx inay u abuuraan xirmada badbaadada COVID-19 ee shaqaalahooda. Waxay ka kooban tahay laba duub oo warqad musqul ah;saddex waji (maaskaro N95 ah, maro maro ah, iyo maro labajibbaaran oo shaandhayn kara);iyo shahaado hadyad ah makhaayad Willett.
"Dhammaan waxaa loogu talagalay qalbi fudayd," Moss ayaa tiri." Markii aan qaybinay qalabka, ma aan qabsan karno shirar waaweyn, sidaas darteed waannu wareegnay oo qaybinay waxyaalahan.Markii aan warqaddii musqusha ka soo saaray qayb kasta, qof kastaa wuu qoslay, niyaddaydana aad bay ii fududaatay.”
Qofna ma garanayo waxa dhici doona mustaqbalka, laakiin inta badan soosaarayaasha ayaa u diyaarinaya macaamiisha inay dib u bilaabaan wax soo saarka oo ay kordhiyaan amarrada qaybaha.METALfx maaha mid ka reeban.
Moss ayaa sheegay in tallaabooyinka ay ka mid yihiin dib-u-habaynta waaxda golaha, labanlaabidda awoodda khadka daahan budada ah, iyo ku darista mashiinnada goynta laser-ka cusub waxay ku riday meel wanaagsan si ay ula tacaalaan dib u soo celinta warshadaha wax soo saarka. Qalabka kale si loogu ogolaado in qaybo badan oo habaysan ay qulqulaan ayaa sidoo kale caawin doona.
"Waxaan qabanay oo riixnay dib u dhac weyn oo shaqo," Moss ayaa tiri." Waxaan diyaar u nahay inaan soo dhaweyno fursado cusub."
Shirkadan yar ee magaalada yar waxay leedahay qorshayaal waaweyn oo mustaqbalka ah. Tani waa war wanaagsan shaqaalaha METALfx iyo muwaadiniinta Willits.
Dan Davis waa tafatiraha guud ee FABRICATOR, warshadda soo saarista birta ee ugu baahsan iyo samaynta joornaal, iyo daabacaadyada walaasheeda STAMPING Journal, The Tube & Pipe Journal, iyo Alxanka. Waxa uu ka shaqaynayay daabacaadahan tan iyo Abriil 2002.
In ka badan 20 sano, waxa uu qoray maqaallo ku saabsan isbeddellada wax soo saarka Maraykanka iyo arrimaha. Ka hor inta uusan ku biirin FABRICATOR, wuxuu ku lug lahaa wax soo saarka qalabka guriga, warshadaha dhammaynta, horumarinta software-ka wax soo saarka iyo ganacsiga. Sida tifaftiraha joornaalka ganacsiga, wuxuu aad ugu safray Maraykanka iyo Yurub, booqashada xarumaha wax soo saarka iyo ka qaybgalka dhacdooyinka wax soo saarka ee ugu muhiimsan adduunka.
Waxa uu ka qalin jabiyay Jaamacadda Gobolka Louisiana oo shahaado saxaafadeed ku qaatay 1990. Waxa uu ku nool yahay Crystal Lake, Illinois isaga iyo xaaskiisa iyo laba carruur ah.
FABRICATOR waa joornaalka ugu horreeya ee samaynta biraha Waqooyiga Ameerika iyo warshadaha wax soo saarka. Joornaalku wuxuu bixiyaa wararka, maqaallada farsamada iyo taariikhda kiisaska si ay ugu suurtagasho soo-saarayaasha inay si hufan u dhammaystiraan shaqadooda.
Hadda waxaad si buuxda u geli kartaa nooca dhijitaalka ah ee FABRICATOR oo si fudud ayaad u geli kartaa agabka warshadaha ee qiimaha leh.
Ilaha warshadaha ee qiimaha leh ayaa hadda si fudud loo heli karaa iyada oo si buuxda loo heli karo nooca dhijitaalka ah ee The Tube & Pipe Journal.
Ku raaxayso helitaanka buuxa ee daabacaadda dhijitaalka ah ee STAMPING Journal, kaas oo bixisa horumaradii ugu dambeeyay ee tignoolajiyada, dhaqamada ugu wanaagsan iyo wararka warshadaha ee suuqa birta stamping.
Ku raaxayso helitaanka buuxa ee nooca dhijitaalka ah ee Warbixinta Wax-soo-saarka oo baro sida loo isticmaalo tignoolajiyada wax-soo-saarka wax-soo-saarka si loo kordhiyo hufnaanta hawl-fulinta oo loo hagaajiyo xariiqda hoose.
Hadda waxaad si buuxda u geli kartaa nooca dhijitaalka ah ee The Fabricator en Español, adigoo si fudud u gelaya ilaha warshadaha ee qiimaha leh.
Gooyaha Laser-ka ee xaashida, Mashiinka Cnc Laser, Alxanka Tooska ah ee Laser, Alxanka dahabka, Kaarboon Fiber Laser Cutter, Laser Cnc Machine Iibka,